भ्यागुतो - जनावरको वा कीरा? tailless amphibians को Detachment
को भ्यागुतो र जीवनको आफ्नो बाटो के मानिस थाह? आफ्नो मनपर्ने खाना रूपमा आँखा र लामखुट्टे फैलएको Monotonous croaking गर्मी सांझ, दिन लायक उपस्थिति (लैजान अप्रिय), (कम से कम, को कार्टून मा देखाइएको) - यी शब्द "भ्यागुतो" को मुख्य संघ छन्। तर मलाई आश्चर्य: भ्यागुतो - जनावरको वा कीरा?
भ्यागुतो: बाह्य विशेषताहरु
यी भ्यागुतो amphibian वर्ग सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिको छन्। आकार (30 250 मिमि को शरीर लम्बाइ) मा फरक, तिनीहरूले अन्टार्कटिका र अष्ट्रेलिया को सम्भावित अपवाद संग, सबै दुनिया भर फैलाउन छन्। tailless amphibians, भ्यागुतो को परिवार स्वामित्वको, त्यहाँ एक साधारण बाह्य विशेषताहरु छ कि 3,500 भन्दा बढी प्रजाति छन्। यो दाँत माथिल्लो चिबुक, weakly webbed हिंद खुट्टा पौडिरहेका, lumpy छाला व्यक्त गरे। भ्यागुतो टाउको - तीन शताब्दीपछि (तल्लो, माथिल्लो र पारदर्शी nictitating झिल्ली) र परिमाण माछा भन्दा बढी मोबाइल को आदेश द्वारा सुरक्षित जो दुई विशाल उभडा आँखा, साथ। को nostrils मार्फत अवस्थित अघि आँखा, र मौखिक गुहा मा खोल्ने वाल्व संग सुसज्जित।
भ्यागुतो - जनावरको वा कीरा?
टाउको को यो peculiar संरचना मद्दत गर्छ भ्यागुतो चुपचाप शिकार डंठल: पानी मा plunging, जनावर बाहिर आफ्नो आँखा र nostrils, यसरी सास र, सबै कुरा विचार, धैर्य आफ्नो संभावित खाने को लागि प्रतीक्षा राख्छ। सुनेपछि वाह आँखा पछि स्थित छ eardrum। यसको पूर्ण पारदर्शी छाला संग ग्लास भ्यागुतो जो शरीर अंगहरु amphibians आन्तरिक संरचना अध्ययन गर्न सम्भव छ भन्दा प्रमुख उदाहरण हो। एक पूर्ण पारदर्शी छाला मार्फत अंदर स्पष्ट पालन गर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम, जनावर: - माथि वर्णन देखि न्याय, प्रश्न "भ्यागुतो जनावरको वा कीरा," तपाईं स्पष्ट र विश्वस्त जवाफ दिन सक्छ! आयाम amphibians व्यापक दायरा छ। सानो क्युबा को प्रतिनिधि हो: यसको लम्बाइ 8,5-12 मिमी छ। व्यक्तिगत छुट्टी amphibians को सबै भन्दा ठूलो - गोल्यतलाई, निवासी क्यामरून भ्यागुतो। वजन सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्रेको प्रतिनिधि प्रजाति3किलो कुल लम्बाइ संग 660 ग्राम (खुट्टा outstretched संग) 87 सेमी। "ठूलो मा" त्यस्तो ठूलो नमूना र प्रत्यक्ष रुचि, क्रिस्टल स्पष्ट पानी र ledges मा विराजमान एक स्तम्भ जस्तै राजा रुचि थियो चट्टानको।
के भ्यागुतो खान्छ
Tucked भ्यागुतो - एक धूर्त शिकारी, व्यक्तिहरूलाई ड्राइभिङ छ जो शिकार: spiders, कीरा, कीडे, slugs र माछा भुट्नु। दृश्यमा सार्न खाना भविष्य परिभाषित भएको, पानी मा भ्यागुतो उहाँलाई अन्तिम नजिक आउन अनुमति दिन्छ र एक टाँसिएको जिब्रो जो एक कीरा छडी बाहिर फेंकता। को forelimbs को मद्दतले आफ्नो मुख यसलाई राख्दै, ठूलो शिकार निल्छ गर्न सक्षम भ्यागुतो। आफ्नो सिकार मक्खी मा पानी पिए निल्छ थिए अवस्थामा छन्। कस्तो भ्यागुतो खाने? उनको पछिल्लो crawling, उडान चलिरहेको भन्ने तथ्यलाई, कि उत्प्रेरित छ; anurans मा स्थिर वस्तु बस चासो कारण छैन।
tailless amphibians को परिवार Waterfront मा र न्यानो महिनामा भन्दा साधारण छ। पशु आन्दोलन त expressive र काटन, कि तुरुन्तै स्पष्ट हुन्छ, जहाँ त्यहाँ "एक भ्यागुतो मा नाउहरु" वा अभिव्यक्ति भएको "एक भ्यागुतो जस्तै कूद।" बनाउन फड्को भ्यागुतो जोडले को खुट्टा straightens; एक पुस शक्ति अगाडि र माथितिर amphibian फेंकता जब यो हुन्छ। अवतरण छोटो अगाडि खुट्टा मा स्थान लिन्छ। भ्यागुतो पानी हिंद खुट्टा, को औंलाहरु झिल्ली बीच स्थित जुन देखि सुरु, रूपमा जोडले नाउहरु। तपाईं प्रश्न स्पष्ट गर्न एक पटक फेरि फर्कन भने "? भ्यागुतो - जनावरको वा कीरा," जवाफ स्पष्ट छ: जनावर!
भ्यागुतो: कसरी उर्तानु गर्न
भ्यागुतो को प्रजनन सीतनिद्रा देखि उठ्दै पछि, वसन्त मा हुन्छ। को कुल रकम 600 देखि 20 हजार अन्डा गर्न लिएर, विभिन्न प्रजातिका मा फरक अन्डा-ढिलाइ। tadpoles लागि खाद्य पशु र तरकारी अवशेष decaying unicellular शैवाल र protozoa छन्। यौवन भ्यागुतो 5-6 वर्ष को एक समग्र जीवन संग उमेर 2-4 वर्ष पुग्न। कैद मा tailless amphibians 10 वर्ष को लागि अस्तित्व जब अवस्थामा त्यहाँ गरिएको छ।
प्रकृति मा भ्यागुतो जीवन यसको singularity को खातामा साँचो चासो छ। त्यसैले, ती सबै भन्दा उपेक्षित बाँया पानी वा जलाशय अन्डा नजिकै आस्थगित; अभिभावकको हेरविचार amphibians को सानो अंश हैरान। उदाहरणका लागि, पुरुष सुरिनामी pipa महिला र पुरुष rhinodermatidae डार्विन पछाडि अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग hatched र हुर्किसकेका भ्यागुतो पछि स्वतन्त्र बाहिरबाट चयन जो एक विशेष झोला घाँटी तिनीहरूलाई बचाउँछ।
भ्यागुतो को विशेष गरी छाला
सबै भ्यागुतो पातलो खुला छाला साँस प्रक्रिया सुविधा, खकार ढाकिएको छ र छाला को बाहिर सुखाने रोक्छ। बाक्लो छाला हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु तिनीहरूलाई रक्षा कि पदार्थ समावेश भ्यागुतो। केही प्रजाति मा, यो पदार्थ विषालु छ, र पनि एक अन्य जनावर द्वारा खाएको हुनबाट जन्तरको भ्यागुतो को प्रकारको। त्यसैले, कि केन्द्रीय र दक्षिण अमेरिका बस्ने डार्ट भ्यागुतो र phyllobates, ग्रह मा सबै भन्दा घातक toxins आवंटित। भूमि चिस्यान को खकार evaporates मा निहित, जसद्वारा amphibian यसको ठूलो रकम गुमाउनु छँदा। यो भ्यागुतो को वासस्थानमा रूपमा नम क्षेत्रको लागि सकेसम्म सहज छ कि यस कारण लागि हो। प्रकृति Entertaining मा एक भ्यागुतो को जीवन; एक रोचक तथ्य सरीसृप छाला मार्फत यसको मात्रा कमी भर्नु, पानी पिउन छैन छ। यो चिल्लो चमड़ी भाइहरू सबै बीच कपाल भ्यागुतो बाहिर खडा; को प्रजनन अवधि ढाकिएको छाला कपाल resembling shreds समयमा यो प्रजाति को पुरुषहरु। कपाल भ्यागुतो को एक विशेषता सुविधा पनि औंलाहरु मा pits गठन, जो, छाला छेड्ने खतरा नंग्रा, को समयमा उत्पादन गर्ने क्षमता छ।
छाला विषालु भ्यागुतो छ?
खैर, छाला विषालु भ्यागुतो को प्राचीन समयमा तीर लागि विष को निर्माण मा मुख्य घटक रूपमा सेवा; एक व्यक्ति 500 एकाइहरु चिकनाना पर्याप्त थियो। बारेमा विषालु भ्यागुतो उज्ज्वल, downright garish रंग मा देख्न सकिन्छ। त्यसैले, विष-डार्ट भ्यागुतो भ्यागुतो - दक्षिण अमेरिका को बासिन्दा - पनि2मिलीग्राम को राशि एक व्यक्ति मार्न सक्नुहुन्छ।
कोटिंग पनि पशु रुप बदल्नु गर्न गर्दछ; यस क्षेत्रमा एक नेता mossy भ्यागुतो, लगभग पूर्ण मश बल्लतल्ल distinguishable को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध, वातावरण एकिकृत छ जो पनि उनको आँखा मानिन्छ। यो भ्यागुतो को यस प्रकारको यो एक पाल्तु जनावर रूपमा राख्न चाहने विदेशी को प्रशंसक बीच धेरै लोकप्रिय छ। , चट्टानहरू र अग्लो रूख कसरी ठूलो आरोहण थाह अप 75 डलर गर्न जो एक व्यक्तिको को लागत,: उष्ण कटिबन्धीय प्रतिनिधिहरूलाई सुन्दर चित्रकला र तदनुसार मूल्यवान।
भ्यागुतो जीवनको बारेमा अचम्मको तथ्य
शरीर को तापमान समान परिवेश तापमान amphibians। अलास्का inhabiting: वास्तवमा निम्न रिपोर्ट रूख भ्यागुतो बरफ टुक्रा हुन्छ कि त्यस्तो हदसम्म जाडो स्थिर मा। यो स्थिर राज्य amphibian सास छैन मा, रक्त र हृदय गतिविधि रोक। वसन्त को शुरू संग बिस्तारै सामान्य जीवन फर्केपछि, एक प्राकृतिक तरिका मा पशु thaws। यी अद्वितीय amphibious, ग्रह मा एक कम तापमान पूरा सक्षम, त्यहाँ मात्र केही प्रजाति छन्, यो वर्ग को सबै भन्दा सदस्यहरू छैन यस्तो अवस्थामा बाँच्न गर्न सक्षम छन्।
भ्यागुतो बच्न एक वृद्धि क्षमता; यो उदाहरण एक पटक भन्दा बढी रेकर्ड गरिएको छ। 1835 मा, एक Englishman प्लेटफर्म संग जमीन संकुचन कसरी र बलुआ को एक ब्लक को बीचमा टूट, र यसको गुहा भ्यागुतो देखि बाहिर कूद देखेको छ। र भ्यागुतो को खोक्रो ब्लक भित्र immured एकदम प्रत्ययनीय रिपोर्ट धेरै हुन्; यो केवल चरम अवस्थामा बच्न भ्यागुतो को अद्वितीय क्षमता पुष्टि गर्छ।
चाहे त्यो भ्यागुतो उड सक्छ?
विकास प्रक्रिया यो amphibian शत्रुलाई देखि यसरी भाग्न उड गर्न सिकेका छन्। विशेषता उडान उदाहरणहरू पनि (कहिले काँही 12 मीटर सम्म पुगन) लामो औंलाहरु splayed webbed को trajectory परिवर्तन गर्न सक्षम। भ्यागुतो, मानव मद्दत बिना छैनन् विश्व रेकर्ड सेट गर्न सक्षम छन्। यसरी, मा तिनीहरूलाई लागि विशेष प्रबन्ध प्रतियोगिताहरु मा लामो जम्प, दक्षिण अफ्रीका मा 1977 मा आयोजित, Sandtzhi उपनाम भ्यागुतो 10.3 मीटर मा कूद!
भ्यागुतो जस्तै प्रत्येक अन्य कुराकानी?
एक भ्यागुतो बीच संचार मानव सुनुवाइ बाहिर ultrasounds प्रयोगको माध्यमबाट मानव कान को पहुंच दायरा हुन्छ। यो कठिनाई मा एक मानिस कम आवृत्तियों लागि सामान्य भिन्न जो, amphibians लागि हल्ला वासस्थानमा बताए गर्न सकिन्छ। यस्तो सुविधा पनि भ्यागुतो को श्रवण अंग को असामान्य स्थान बढावा; eardrums विशेष गुहा भित्र, आँखा पछि अवस्थित छ। धारणा गरेर, विद्वान, यस्तो व्यवस्था कान पानी भ्यागुतो हल्ला आफ्नो वासस्थानमा मा निहित हटाउन अनुमति दिन्छ। धेरै किलोमिटर अर्धव्यास कवर गर्न बल अन्तर्गत सबैभन्दा vociferous भ्यागुतो। bullfrog चिल्ला देखि, पहिलो पटक सुने र पछाडि फर्केर हेर्दा बिना एक विशाल भयानक जनावरको गर्जन संग सम्बन्धित छ, तपाईं आफ्नो एडी गर्न Indulge गर्न सक्नुहुन्छ।
Tunguska meteorite - विगतका unsolved रहस्य
Lingonberries र cranberries: मतभेद र उपयोगी गुणहरू
प्लान्ट बल्ब: उपयोगी गुणहरू, आवेदन
बिरुवाहरु काई परिवार फैलियो। प्रकृतिका मश अर्थ
के फर्न ब्लूम ... भारोत्तोलन को पर्दा को गुप्ति
कम्पनी को लिक्विडिटी र यसको मुख्य सूचकहरू
समुद्र नुन संग स्नान पलिश: चार फिटिंग निर्धारण
कारण, लक्षण र मानिसहरू मा chlamydia लागि उपचार खुराक। chlamydia को उपचार को लागि तयारी
लिपि "क्रिसमस पार्टी" को तैयारी समूह मा: कविता, खेल, प्रतियोगिताहरु
को चार्ल्स Perrault परी कथा को सारांश, "गधा छाला"
पी। ताचीविकोस्की - जीवन को वर्ष। क्लिनोव्स्कीको जीवनको केलिनमा
प्राथमिक ग्रेड मा विधि र निर्देशन को माध्यम
इटाली समीक्षा र रोचक तथ्य मा Ligurian सागर
खेल निर्देशिका र कसरी पाउन के छ?